Ingabe iChiefs izowagcina amazwi ayo ngoKomphela? | News24
Ingabe iChiefs izowagcina amazwi ayo ngoKomphela?
PHOTO: kaizerchiefs.comKubukeka busekude ukuphela ubudlelwano phakathi kuka Steve Komphela kanye neqembu le-Kaizer Chiefs.
UMSUNGULI noSihlalo weKaizer Chiefs uKaizer “Shintsha Guluva” Motaung uthi umqeqeshi wakhe uSteve Komphela akayi ndawo.
UMotaung uthi abantu kufanele bakhumbule ukuthi uKomphela usasalelwe unyaka owodwa kwikontileka yakhe nokwenza bangacabangi ukuvele bamchithe.
Lesisikhulu siyavuma kona ukuthi okwenzekayo manje kwiKhosi kuyihlazo futhi akukaze kwenzeke emlandweni walekilabhu naseminyakeni engamashumi amathathu nesikhombisa selokhu leliqembu lasungulwa.
Uyavuma futhi ukuthi kuthuse wonke umuntu ukungawini ngisho inkomishi noma umqhudelwano owodwa amasizini amabili.
“Ngiyazi okwamanje akekho othokozile, mhlawumbe ngingasho ngithi iningi lethu lisathukile ukuthi ngempela ngempela akukho esikutholile iminyaka emibili ilandelana ? kusho uMotaung.
Uthi kodwa malingenziwa iphutha lokugxeka noma ukubeka umqeqeshi icala yedwa, kodwa kufuneka kutholakale ukuthi inkinga ibilaphi.
“Akusizi ukuvele unqume ukushintshashintsha abaqeqeshi noma yikanjani, kuyayilimaza ithimu. Umqeqeshi wethu usasalelwe unyaka owodwa kwinkontileka yakhe futhi-ke kungabe siyizimpumpethe ukusola umuntu oyedwa ekuhlulekeni kwethu.”
Lesisikhulu esidume ngokudla ukotini nokuzithanda nangokuphatha iqembu lakhe ngobuchule nangobuchwephethe obungandile, uthi ikilabhu yakhe angexe ichithe imali eningi ngesizini ezayo kodwa izoke ithi ukuqiniqinisa emuva.
“Ukulungela isizini entsha akuchazi ukuthi kufanele usebenzise imali noma uyichithe budlabha, kodwa sibheke ukuthi siqinise abadlali bethu basemuva.”
Umlando waMaKhosi uyatshengisa ukuthi uMotaung akuyena umuntu ovamise ukuxosha abaqeqeshi bakhe noma yikanjani noma ngesigubhukani, kodwa yingabe uqinisile yini ukuthi uKomphela akayi ndawo emva kokungawini lutho amasizini amabili, mhlawumbe lokhu akushoyo okwamanje nje?